स्वास्थ्य – Ekathmandunepal
८ चैत्र २०७४, बिहीबार २१:२५ ekathmandu Nepal 0
भगवान शिवका पुत्र कुमार कार्तिकेयले ज्योतिषशास्त्रमा एक ग्रन्थको रचना गरे जो मानिसको अंग या लक्षणमा आधारित छ । यस ग्रन्थको कुरा समुद्र ऋषिका सहयोगले संसारमा फैलियो । यस ग्रन्थमा पुरुषको कयौं शुभ लक्षणको कुरा भनिएको […]
आजैबाट सावधान : नव जोडीले बरु “कन्डम” प्रयोग गर्दा राम्रो, गर्भनिरोधक चक्कीले ज्यानै जान सक्ने बढ्यो खतरा
६ चैत्र २०७४, मंगलवार ०८:४१ ekathmandu Nepal 0
काठमाडौँ । यौनको विषयमा उदार र जागरुक बन्न थालेपछि नेपालमा गर्भनिरोधक चक्कीको प्रयोग बढेको छ । पछिल्लो समय पिल्स र निलोकनलाई गर्भनिरोधक चक्कीको रुपमा नेपाली महिलाले बढी मात्रामा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, गर्भनिरोधक […]
यी हुन्, पाँच दिनमै मोटोपन घटाउने तथा किड्नी सफा गर्ने घरेलु उपाय !
६ चैत्र २०७४, मंगलवार ०७:४८ ekathmandu Nepal 0
हामीमध्ये कसैलाई पनि अनावश्यकरुपमा मोटाउनु राम्रो लाग्देन । त्यसो त, मोटोपन रोग लुकाउने पर्दा समेत हो । हामी मोटोपनबाट मुक्त हुन विभिन्न अभ्यास गर्दछौं । तर यो कहाँ सजिलो छ र ? तर यहाँ तपाईको […]
पढेको कुरा दिमागमा सम्झिन यो तरिका अपनाउनुहोस् , कुनै परिक्षामा फेल हुने छैन !
४ चैत्र २०७४, आईतवार ०८:३९ ekathmandu Nepal 0
काठमाडौ । धोत्लिएर रातो दिन पढ्नुहुन्छ ? जति घोटेर पढ्यो बिर्सि हालिन्छ । परिक्षाका बेला भुलिहाल्छ । फेल हुने धेरै समस्या छ । अब चिन्ता नलिनुहोस् । हुने त पढेको कुरा दिमागमा नबस्दा विद्याथीहरु झन् […]
थायरायड भएको कसरी थाहा पाउने ? जानीराखौ
४ चैत्र २०७४, आईतवार ०८:२३ ekathmandu Nepal 0
काठमाडौं । थायराइड मानव शरीरमा पाइने एंडोक्राइन ग्लैंडमध्ये एक हो । थायरायड ग्रंथि गर्दनमा श्वास नलीभन्दा माथि स्वरयन्त्र दुबै भागमा रहेको हुन्छ । यसको आकार पुतलीको आकारमा हुन्छ । यसले थाइराक्सिन नामक हार्मोन बनाउँछ । […]
महिलाले पुरुषको ‘वीर्य’ खान हुन्छ कि हुदैन ?? खाँदा के हुन्छ होला ?? थाहा पाउनुहोस्
३ चैत्र २०७४, शनिबार २१:१२ ekathmandu Nepal 0
वीर्य किन खाइन्छ ? सामान्यत: प्रकृतिले यसलाई योनिमा राखियोस् भन्ने ध्येय राखेको हुनुपर्छ, त्यसैले यो त्यति मीठो वा स्वादिलो हुँदैन । धेरैजसो व्यक्तिलाई यसको स्वाद वा गन्ध मन नपर्न सक्छ । केही व्यक्तिलाई यस किसिमको […]
मलाइ बचाउनुहोस ! प्लिज सक्नु हुन्छ भने आफ्नै बैनी सम्झेर सहयोग गर्नु होला, सक्नु हुन्न भने शेयर गरेर अरुलाई सहयोग गर्ने मौका दिनुहोला,भिडियो रिपोर्टः- शेयर गरौ !
२१ फाल्गुन २०७४, सोमबार ०९:०१ ekathmandu Nepal 0
प्लिज सक्नु हुन्छ भने आफ्नै बैनी सम्झेर सहयोग गर्नु होला, सक्नु हुन्न भने शेयर गरेर अरुलाई सहयोग गर्ने मौका दिनुहोला,भिडियो रिपोर्टः- शेयर गरौ ! ग कुनै सूचना दिएर आउदैन यो त एउटा बज्रपात भएर आउछ […]
कस्तो हुन्छ पहिलो पटकको यौन सम्पर्क ?
१९ फाल्गुन २०७४, शनिबार १६:५० ekathmandu Nepal 0
साधारणतया यौनिच्छेद नफाटेका केटीहरुलाई कुमारी भनिन्छ। यौनिच्छद नरम र पातलो जालो जस्तो हुन्छ, जुन स्त्रीको योनीको मुखमा टाँसिएर रहेको हुन्छ । यसले योनीको मुखलाई पूर्णतया बन्द गरेको भने हुँदैन । समान्यतया जब केटीहरुको पहिलो यौन […]
यौन सम्पर्क गर्न लाग्दा केही समयका लागी मात्र लिङ्ग उत्तेजित हुन्छ । के गर्ने होला ? – डा राजेन्द्र भद्रा
१९ फाल्गुन २०७४, शनिबार १६:१३ ekathmandu Nepal 0
म ३१ वर्षीय विवाहित पुरुष हुँ । मैले लगातार १५ वर्षदेखि ६ महिनाअघिसम्म हस्तमैथुन गर्दै आएको थिएँ । मेरो विवाह भएको तीन महिना भयो । यौनसम्पर्क गर्न लाग्दा मेरो लिङ्ग उत्तेजित हुन्छ, तर केही समयका […]
१९ फाल्गुन २०७४, शनिबार १५:११ ekathmandu Nepal 0
बढ्दो आधुनिकिकरणले जीवनशैली जति सहज बनाएको छ । मानव स्वास्थ्यमा नयाँ समस्या पनि निम्त्याइरहेको पाइएको छ । सन्दर्भः हाई ब्लडप्रेसरको हो । कुनै समयमा आक्कलझुक्कल देखिने ब्लडप्रेसरको समस्या अहिले धेरैको साझा भएको छ । २० […]
बिहानै नीता बाथरुममा नाङ्गै नुहाउँन थाली (557)
पाँच पाण्डबसँग द्रौपदीले मनाएको सुहागरात यस्तो रहेछ (554)
जोसमा होस् गुमाउदै आफ्नो कपडा खोल्दै नाङ्गिएर भिडियो… (460)
दिपीकाको पुरै शरिर काँप्न थालेको थियो (452)
बोइफ्रेन्ड संग सेक्स भिडियो कल गर्दै युवती । लिक… (288)
यस्तो सपना देखेमा तपाईंको मृत्‍यु छिट्टै हुदैछ भन्ने… (155)
यी ३२ गुण जो पुरुषमा हुन्छ त्यो पुरुष महापुरुष हुन्छ… (141)
दिदीको दुःख देखेर बहिनीले भिनाजुको गर्भ बोकिन (119)
मैले ढोका लगाउन भुलेछु , काकाले पुरै देख्नु भयो (1,392)
खलासीले मलाई रात्री बसमा जबर्जस्ती सुतायो (1,226)
जोसमा होस् गुमाउदै आफ्नो कपडा खोल्दै नाङ्गिएर भिडियो… (1,013)
बिस्तारै नै गर्छु मैया भने मैले पनि (959)
ओई सेक्सी बहिनी, स्कर्ट माथी सार्दे न त (911)
किन हात लाई दुख दिनु हुन्छ राजु बाबु हामि हुदा हुदै (862)
अहिले फेरी लाईभ आएर अर्चना पनेरुले गरिन यस्तो,आफ्नो… (858)
मध्यरातमा छोरीको कोठामा केटाको आवाज, विवश छोरीको… (821)
पाँच पाण्डबसँग द्रौपदीले मनाएको सुहागरात यस्तो रहेछ (752)
महिलाले पुरुषको ‘वीर्य’ खान हुन्छ कि हुदैन ?? खाँदा… (732)
गर्भ नरहने यौन सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ,त्यसो भए यौन… (728)
फेरी लिक भयो एक जोडीको आपत्तिजनक अवस्थाको भिडियो… (722)
बिहानै नीता बाथरुममा नाङ्गै नुहाउँन थाली (673)
यसरी भयो युएस बंगला बिमान दुर्घटना :विमानस्थल… (642)
पार्वती दिदी सँग मज्जा लिये (627)